kophyozin's blog on decentralized web
သကြားဓါတ် မှီဝဲခြင်းကျွန်ုပ်တို့ဟာ နေ့စဉ် အချိုဓါတ်ပါတဲ့ အစားအစာ တွေကို စားသုံးခြင်းနဲ့ သွေးထဲက သကြားဓါတ်ပါ၀င်မှုပမာဏကိုမြင့်မားစေခဲ့ကြပါတယ်။သွေးထဲမှာ သကြားဓါတ်ပါ၀င်မှု များနေခြင်းဟာ သင့်ဦးနှောက်ရဲ့ မှတ်ဉာဏ် နဲ့ သင်ကြားမှု
ကြိုးစားကြည့်ပါမကောင်းသူတစ်ချို့အပေါ်မှာ စိတ်ထားတတ်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ လောဘကြီးတဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ပေးကမ်းတတ်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဒေါသကြီးတဲ့ သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါ မေတ္တာထားတတ်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ မောဟကြီးတဲ့ သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါ
ပညာမခံစားရဘူးတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲခံစားရတာပေါ့။ ခံစားရပေမယ့်လည်း မျက်နှာမှာ မပေါ်လွင်အောင် ထိန်းချုပ်နိုင်တာက ပညာပဲ.......
စာအုပ်စာပေစာအုပ်စာပေတွေ ဖတ်ပြီး အသိဉာဏ်တွေ တိုးလာပေမယ့် လက်တွေ့ အသုံးမချရင်တော့ သင်ဟာ စိတ်ကူးယှဉ်သမား တစ်ယောက်ပါပဲ။ ငါးကြီးကြီးလိုချင်ရင် ပင်လယ်ထဲသွားပါ။ အဲ့ဒီမှာ မုန်းတိုင်းတော့ ရှိမယ်။
အတွေ့အကြုံကိုယ့်ကိုကိုယ် အားကိုးတတ်လာတယ်။ သူတို့ကြောင့် သင် အတွေ့အကြုံတွေ ရလာတယ်။
မေ့တယ်ဝမ်းနည်းခြင်းတွေသာ ရင်ဝယ်ပိုက်ခါနေခဲ့ရသူမို့ ပျော်ရွှင်ခြင်းအရသာဆိုတာတောင် မေ့ပျောက်လုဖြစ်နေပြီ
စိတ်ကူး မကောင်းတဲ့အတိတ်ကို လက်လွတ်ပြီး ရှေ့ကိုခရီးဆက်တယ်။ အတိတ်မှာတင် နစ်ပြီး အနာဂတ်ကို လျစ်လျူရှုတယ်။ တခြားသူရဲ့အစွမ်းအစကို အောက်ကျို့သင်ယူတယ်။ တခြားသူရဲ့ရှေ့မှာ ကိုယ့်အစွမ်းအစကို ကြွားဝါတယ်။ သင်ယူဖို့ရာအားသန်တယ်။
အသိလူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်၊ မချစ်ဘူးဆိုတာထက်..သူဟာ ကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်ပျော်အောင်ထားနိုင်လဲ.. ကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်လောက်ထိ Supportလုပ်ပေးနိုင်မလဲ.. ကိုယ့်အတွေးတွေနဲ့ကိုယ့်အပေါ်ဘယ်လောက်အလေးထားလဲဆိုတာကိုပဲ
ပိုခဲ့မိတယ်နားလည်ပေးနိုင်တာတွေထက် ပိုပြီးနားလည်ပေးခဲ့မိတယ်။ ကိုယ်ကချစ်တာပဲလေ ... သူပျော်ရင် ကျေနပ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ... အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ကျွန်မ ချစ်ပေးခဲ့တယ် ။ အပြင်သွားတော့မယ်ဆိုရင် ... ဘာကြောင့်သွားတယ်
ကိုယ့်ဘက်ကကိုယ့်ဘက်က အသွားတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ သူတို့ ဆီက အပြန်မရှိခဲ့တာကို သိပ်မပြောလိုခဲ့ဘူး… သူတို့ ဆီမှာ တစ်ကျပ်ပြည့်ဖို့ တစ်ပြား လိုခါမှ ကိုယ့်လက်ထဲက တစ်ပြားကို တောင်းမရတော့ စိတ်ဓာတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောချင်ကြတာမျိုး…
သဝန်လဲ မတိုတော့ဘူးကိုယ်ပင်ပန်းတာအပြင် သူလဲ ပင်ပန်းမယ့်အရာတွေကို ရှောင်လိုက်ရုံပါ။ သူ့အနားမှာ ရှိနေတဲ့အခါ ကိုယ်ပျော်ပါတယ်ဆိုပေမယ့် သူ့အနားကိုရောက်ဖို့ ဘယ်တော့မှ မကြိုးစားတော့ဘူး။ သူ့ကိုချစ်နေရုံလေးကပဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ အများကြီး
Street Photography: random street shots from KrakowHi there my Hivean friends and followers! Krakow,abeautiful Polish city withavery long and rich history, has been our nomadic base for one year already and my Krakow photo album contains almostathousand
ကြောင်စိတ်ဘေးက လူတွေ ရှေ့ကလူတွေ သတိထားမိမှာပဲ ။ ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလိုက်မလဲ စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ပိုင်း အဲ့လို မဖြစ်တော့ဘူး ထင်တာ ဖြစ်တုန်းပဲ ။ ဒါနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်လဲ ဆိုတော့ ကိုယ်ပြောရမယ့် နေ့ မတိုင်ခင်
နာကျင်စရာဒီနေ့အတွက်သာ ကိုယ့်အချစ်ကို သက်သေမပြနိုင်သေးပေမယ့် နောင်အနာဂတ်အတွက်တော့ တကယ်စစ်မှန်ရင် သူ နားလည်လာနိုင်ပါတယ်... ကိုယ့်တကယ် အလိုရှိတဲ့သူကို မျှော်လင့်စောင့်စားရတယ်ဆိုတာ နာကျင်စရာအကောင်းဆုံးပါပဲ.. ဒါပေမယ့်
ကြိုက်နှစ်သက်မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လူ အရာဝတ္ထု အတွေးအခေါ် အခြေအနေ တစ်ခုကို မိမိ ဘာသာ စိတ်ကြိုက် နှစ်သက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတစ်ပါးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုတော့ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချပြီး သင်ကြိုက်တဲ့အရာတွေကို ဂုဏ်တင်ပြီး
စိတ်ဒဏ်ရာစိတ်ဒဏ်ရာတွေပေးပြီး ချန်ရစ်သွားခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ကြောင့် စိတ်ဒဏ်ရာတွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ ဘဝခရီးဆက်နေကြရတဲ့ ဇနီးတွေ ၊ ခင်ပွန်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မိဘတွေကြောင့် တဘဝစာ စိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့
နွယ်ပင်နွယ်ပင်ဆိုတာ အမှီမရှိရင် အပေါ်မတက်နိုင်ဘူး။ အမှီရှိလို့ အပေါ် ရောက်ခဲ့ပြန်လည်း အမှီလဲတာနဲ့ ပြုတ်ကျမှာပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်လမ်း ကိုယ်ဖောက်၊ ကိုယ့်အိမ် ကိုယ်ဆောက်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။
ယုံကြည်တက်တယ်ကိုယ်ဟာ တခြားသူထက် တခုခု သာလွန်ထူးကဲနေတယ်ဆိုတဲ့ သိစိတ် ၊ မသိစိတ်ကြောင့် သူများနဲ့မမြဲပေမယ့် ကိုယ်နဲ့မြဲမှာပါ။ သူများပြောတာ နားမထောင်ပေမယ့် ကိုယ်ပြောတာ နားထောင်မှာပါ။ အရင်က ဆိုးပေမယ့် ၊ ရှုပ်ပေမယ့်
(ESP /ENG) Tajali white meat fish 👩‍🍳 Exquisite lunch foraweekend // Tajalí pescado de carne blanca 👩‍🍳 Exquisito almuerzo para un fin de semana.Feliz fin de semana tengas todos mis queridas amigas y amigos de la comunidad #Foodies, cada quien tiene su tradición dentro del hogar yami me gusta ir los fines de semana al mercado, comprar pescado
El famoso barquillón de tres saboresApoyaranuestros amigos emprendedores es importante y motivador, y en ocasiones también es muy delicioso, en especial, si venden barquillones de tres sabores. Mi amigo @reymoya95 es un hombre emprendedor,